UNengomasha umfuna eNaturena uMoseamedi ngesizini ezayo
UMGADLI weMaritzburg United uJudas Moseamedi ezama ukudlubulundela kuRamahlwe Mphahlele weKaizer Chiefs emdlalweni weDStv Premiership lapho ashaya kuwona elinye lamagoli. Isithombe: Sydney Mahlangu/BackpagePix
Zakhele Xaba | February 10, 2021
OWAYEYINJINI yeKaizer Chiefs, uTinashe ’General’ Nengomasha, ubala 'isitha' sabalandeli baleli qembu, uJudas Moseamedi ongumgadli weMaritzburg United, kubadlali okufanele basayiniswe eNaturena ekupheleni kwesizini.
Ngesonto elizayo uma kuvalwa iwindi lokusayinisa abadlali, siyaphela isigwebo seChiefs esigixabezwe yiFifa ebesiyivimbela ukuthi ingababhalisi abadlali abasha. Umsebenzi omkhulu obhekene nethimba labaqeqeshi owokuthola abadlali abazovusa iqembu nokunquma ngalabo okufanele bakhonjwe indlela.
Ngesonto eledlule umqeqeshi weChiefs, uGavin Hunt, uveze ukuthi lude uhlu analo lwabadlali abheke ukuvusa ngabo iqembu ngesizini ezayo kodwa wenqaba ukudalula amagama abo.
UNengomasha, odlale iminyaka engu-10 kwiChiefs, ukholwa wukuthi igama likaMoseamedi, kufanele libhalwe phezulu ngokugqamile kwabafunekayo eNaturena.
"Ngokwami umdlali wokuqala okufanele bamthole nguJudas Moseamedi. Angangena khaxa esitayeleni sikaGavin ngoba mude, uyakwazi ukubamba ibhola phambili futhi uyawashaya amagoli. Ngaphezu kwalokho neminyaka isamvumela. Ngidlalile naye kwiMpumalanga Black Aces esemncane. Ngiyayithanda indlela asekhule ngayo ebholeni. UGavin ungiqeqeshile kwiBidvest Wits, ngiyasazi isitayela sakhe. Ngakho uJudas engalunga endleleni uGavin afuna iqembu lakhe lidlale ngayo, "kusho uNengomasha.
UMoseamedi unuka iqaqa kubalandeli beChiefs ngenxa yokuhlala eshaya amagoli uma leli qembu libhekene neMaritzburg. Omunye umdlali uNengomasha amfuna eNaturena nguThabo Nodada weCape Town City oyibamba enkabeni yenkundla. Nokho kungadingeka iChiefs ikhokhe imali eshisiwe kwazise uNodada usayine inkontileka entsha neCity ekuqaleni kwesonto.
Ngempelasonto edlule, iChiefs iphinde yaphoxa abalandeli ikhishwa kwiNedbank Cup yiRichards Bay FC. Lokhu akubuzwa ukuthi kwengeze ubuhlungu ezinhliziyweni zabaningi abayilandelayo, phezu kokuthi iqembu belikade selikhombisa ukuhlangana emidlalweni eyedlule.
"UBra K (Kaizer Motaung) kufanele ahlale phansi nethimba lakhe babheke ukuthi yikuphi okungenzeki kahle, yikuphi lapho konakele khona. Yikuphi lapho benze khona amaphutha. Leli yithuba elihle lokuliqala phansi iqembu ngabadlali abasezingeni elifanele abazolisiza iqembu libuyele ezingeni elifanele ukuba kulona,"kusho uNengomasha.
NgoMgqibelo, iChiefs izovakashela iWyadad Casablanca yaseMorocco emdlalweni wokuvula wamaqoqo weCaf Champions League ozoba seStade Mohamed V ngo-9 ebusuku.